Zanu-PF Yonetsana neNyaya yeSarudzo dzeMatunhu
Mbudzi 01, 2013
WASHINGTON — Zanu-PF inoti ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musarudzo dzebato iri dzekutsvaga hutungamiri hutsva hwematunhu.
Kunetsana kuri mubato iri kwakonzera kuti sarudzo dzitadze kuitwa mumatunhu masere, kunze kwe Midlands neManicaland.
Mutauririri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vati ichokwadi kuti pane kuchema chema kwakanyanya kwekuti sarudzo idzi dziri kubirirwa vamwe vachinzi vari kushandisa mari kana kuita zvechikiribidi.
Vakapinda musarudzo dzekutsvaga sachigaro wekuManicaland, Amai Monica Mutsvangwa, avo vanonzi vari kutsigira chikwata chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo, VaEmmerson Mnangagwa, vakabuda musarudzo dzavaikwikwidzana naVaJohn Mvundura.
VaMvundura vanonzi vari muchikwata chinonzi chinotungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato, Amai Joyce Mujuru. Amai Mutsvangwa vanoti sarudzo dziri kubirirwa.
KuMidlands vanonzi vari kudivi raAmai Mujuru, VaJason Machaya, vari kutatsurana naVaLarry Mavima, avo vanonzi vanotsigirwa naVaMnangagwa. Pane kukandiranwa makobvu nematete kuMidlands.
Nhengo dzeZanu-PF dzataura neStudio 7 dzisingadi kudomwa nemazita adzo dzinoti nyaya iri kunyanya kunetsa inyaya yekuti paita zvikwata zviri kurwisana chimwe chichinzi chiri kutsigira Amai Mujuru chimwe chichitsigira VaMnangagwa.
Asi Amai Mujuru naVaMnangagwa vanosimboramba havo kuti vane zvikwata zvavanotsigira. VaGumbo vanojekesa zviri mubato ravo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari chipangamazano musangano reInternational Crisis Group kuchamhembe kweAfrica, VaTrevor Maisiri, vanoti zviri kuitika mu Zanu-PF, zvinopera chete kana bato iri rikabuda pachena mukutaura nyaya yeachatsiva VaMugabe.